Uyifumana njani iNethiwekhi engenazingcingo usebenzisa iWindows 7
Ingxaki yokuqala ohlangabezana nayo xa uzama ukwenza uqhagamshelo lwenethiwekhi ngaphandle kwamacingo kukufumana inethiwekhi. Ayizizo zonke iinethiwekhi ezingenazingcingo ezibonakala kuqala.
Khumbula ukuba izinto ezibonakalayo ezikungqongileyo zichaphazela umqondiso: iindonga, iiseti zeencwadi, izahlulelo ezinkulu ezenziwe kwilothe, nakumaqhawe amakhulu. Ezo zinto zivala ngokulula isignali engenazingcingo. Hamba ujikeleze. Ngamanye amaxesha, ukuhambisa ilaptop ziinyawo nje ezimbalwa kwicala elinye kuphucula ukwamkelwa komqondiso. Khumbula ukuba ukuba awukwazi ukubona ihabhu engenazingcingo ngokuthe ngqo, amathuba okuba awuyi kufumana siginali eqinileyo.
Windows 7 ineqhosha lokuhlaziya:
r 031 ngeenxa zonke ipilisi eluhlaza okwesibhakabhaka
Ezinye iinethiwekhi ezingenazingcingo azizithumeli ii-SSID zazo. Nangona i-NIC engenazingcingo isathatha umqondiso, akukho gama linikiweyo ngendawo yokufikelela. Kuya kufuneka unikezele ngegama.
KwiWindows 7, landela la manyathelo ukunxibelelana nenethiwekhi engenazingcingo engabonisi igama layo:
Vula iPhaneli yokuLawula.
Khetha ikhonkco Jonga imeko yeNethiwekhi kunye neMisebenzi evela phantsi kwenethiwekhi kunye nesihloko se-Intanethi.
Iwindow yeNethiwekhi kunye noKwabelana yeZiko iyavela.
Ipilisi emhlophe engqukuva 54 760
Khetha ikhonkco ukuseta unxibelelwano okanye inethiwekhi.
Cwangcisa uxhulumaniso okanye iwindow yeNethiwekhi.
yeyiphi ipilisi engu -333
Khetha ngesandla ukudibanisa kwinethiwekhi engenazingcingo.
Cofa iqhosha elilandelayo.
Chwetheza inethiwekhi ye-SSID (igama) kwibhokisi yokubhaliweyo yegama leNethiwekhi.
Khetha uhlobo lokhuseleko kwimenyu yohlobo lweqhosha loKhuseleko.
yeyiphi eyona ntsholongwane ilungileyo
Ukuba iqhosha lohlobo lwe-Encryption liza kubakho, khetha uhlobo olufanelekileyo lokubethela kwimenyu.
Chwetheza igama eligqithisiweyo lomnatha ongenazingcingo kwibhokisi yokubhaliweyo yoKhuseleko.
Beka uphawu lokutshekisha ngokhetho Qala olu Nxibelelwano ngokuzenzekelayo. Ngale ndlela, awunyanzelekanga ukuba ufake olu lwazi lunye kwakhona ukuba uyafuna ukuphinda uqhagamshele kwinethiwekhi efanayo engenazingcingo.
Cofa kwiqhosha elilandelayo ukunxibelelana nenethiwekhi.
Ngethuba nje ungakhange uhlambe nantoni na, kwaye oothixo benethiwekhi bayonwaba, uqhagamshele kwinethiwekhi engenagama engenazingcingo.
amoxicillin sinus usulelo idosi
Khetha ukhetho lokuQhagamshela.
Kwaye uqhagamshelo lugqityiwe.
Esinye isizathu sonxibelelwano olwehlisiweyo inokuba liphelelwe lixesha. Umzekelo, ezinye iinkonzo zokuhlawula ngaphandle kwamacingo zikunika kuphela ixesha elifikelelekayo lokufikelela. Emva kokuphela kwexesha, awusenxibelelananga okanye unokubona iphepha lasekhaya lokuHlawula kude kune-Intanethi.
Okokugqibela, ingxaki yoqhagamshelo inokuba kukuba igama eligqithisiweyo alichanekanga. Ibhokisi yencoko yababini ikuxwayisa ngayo, kodwa gcinani engqondweni ukuba naziphi na iiphasiwedi zenethiwekhi ezingenazingcingo ozigcinileyo kwiPC yakho ezinokuthi zitshintshwe ziinethiwekhi ezahlukeneyo ofikelela kuzo.
Ungajonga amandla oxhulumaniso ngokukhomba imouse kwi icon yonxibelelwano lwe-wee kwindawo yesaziso.
KwiWindows Vista, amandla oxhulumaniso olungenazingcingo lukwaboniswa phantsi kwendawo yolwazi lwenethiwekhi kwindawo ekwabelwana ngayo yeNethiwekhi kunye noQhagamshelo.
Ukuba usebenzisa iWindows 7 okanye iWindows Vista, ungafaka izixhobo ezahlukeneyo zokunxibelelana ngaphandle kwamacingo kwi-Sidebar. Uninzi lubonisa igama lenethiwekhi engenazingcingo, amandla esignali, kunye nedilesi ye-IP.
Izixhobo zomntu wesithathu zinokusetyenziselwa ukukala amandla esignali, njengesixhobo sokunxibelelana ngaphandle kwamacingo esiboniswe ngaphambili. Ezahlukeneyo umqhubi wemfazwe Izixhobo, ezisetyenziselwa ukufumana imiqondiso engenazingcingo, zinokusetyenziselwa ukufumana amandla esignali. Inkqubo ye- KwiNetStumbler lukhetho oludumileyo kwaye unokukhutshelwa kwiwebhu.
iziphumo ezingalunganga zentsholongwane
ukuvela kwimisipha yethole
Umsebenzisa njani umncedisi wokufuduka
I-sulfamethoxazole 800 iyanciphisa ithebhu ye-160mg